China ALUMINUM COMPOSITE PANEL fekitari uye bhizimisi | Alucosun
ALUMINUM YAKANYANISWA PANEL (Yechidziro chemadziro
ALUMINUM KOMPANITI Panel
Nekuvandudzwa kwetekinoroji tekinoroji, Alucosun FR yakagadziridzwa kuti inyatsoita zvinodiwa nemirau yekudzora mumidziyo yezvivakwa. Alucosun FR yakumbirwa nevagadziri vepasirese uye varidzi vezvivakwa kwete chete nezvakanaka zvivakwa zvakadai sekunyanyisa - kusimba, kuomarara kwakanyanya asi kugona fomu, asi zvakare, chakanyanya kukosha, kushanda kwayo kunoshamisa mukuzadzikisa humbowo kunobatsira kubva kune kwayo mineral- yakazadzwa core.
Varitey yemavara ane yakakura spectra yeyakajairwa uye echinyakare mavara, pamwe nematt uye yakakwira gloss nishes. girazi uye rakapwanywa nished zvakare Alucosun ndiye rst mugadziri uyo anopa akafara mapaneru (2000mm) inotsigira yakafara fomati kudhinda.
Yakasarudzika Nyore Peel Inodzivirira Firimu iyo inogona kubviswa zviri nyore pese paunoshandisa. Panzvimbo yepamusoro haizobata chero chinomira padanho rekubvisa maitiro. Viscosity yeiyo Firimu haina kutsauka nekufamba kwenguva mhedzisiro inowedzera masherufu-hupenyu hweAlucosun Sign ®.
WAKATENDEKA QA SYSTEM
Yakasimbiswa uye yakanyorwa QA system inovimbisa mhando yechigadzirwa chatinounza. Inogoneswa nekubatanidza zvakakwana iyo yakazara-yakazara Rabhoritari nevane hunyanzvi vashandi. Yese batch yekugadzira inoedzwa panguva yakajairwa yenguva dzesampuli uye mishumo inochengetwa yakachengetwa yakachengetedzwa kuchengetedzwa kwekutevera mune ramangwana.
Pfupi Tungamira NGUVA
Tiri kushanda kutenderera nguva nekutora zvakakwana zveRaw Zvishandiso zvemhando dzakasiyana kuti tishandire vatengi vedu pasirese. Pamusoro pezvo, isu takarongedzwa zvine hungwaru padyo nenzvimbo dzinotigonesa kuita zvigadzirwa zvetsika zvakare, zvinoita kuti nguva yedu yekutungamira ipfupike pane vamwe vazhinji vagadziri.
Isu takaita mupiro wakakosha kumakambani eSignage nekugadzira chigadzirwa chitsva. Yedu R & D kupatsanura mukubatana pamwe yemuno PPG yekugadzira nzvimbo yekugadzira yakakosha PE pendi iyo inogona kuenderana nemhando dzese dzeDhijitari Yekudhinda michina. Zvichakadaro, isu tiri kuomarara tichishanda mukugadzira chigadzirwa chitsva icho chakareruka uye chakachengeteka kune vatengi vedu.
Chiratidzo cheAlucosun®aluminium composite pani inoumbwa nemaviri maaluminium machira uye polyethylene musimboti ayo akavezwa mune inoenderera maitiro neakanyanya tembiricha.
Chinhu Range Saizi Yakakura
Panel ukobvu (mm) 2-8mm 2mm, 3mm, 4mm, 6mm
Aluminium Ganda Ukobvu (mm) 0.1-0.5mm 0.12mm, 0.15mm, 0.21mm, 0.3mm
Upamhi 1000-2000mm 1220mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm
Kureba ≥1000mm 2440mm, 3050mm, 3660mm, 4050mm
Ndeiya yakaita Tolerances
Ukobvu (mm) -0 + 0.2
Upamhi (mm) ± 2
Kureba (mm) ± 3
Bow Kunonyanyisa (mm) ≤5
Squareness Kunonyanyisa (mm) ≤5
Paint ukobvu (micron) 18-20µm
Penzura Kuomarara 2H
Kusimba kweKupfeka 2T
Kupisa Kuramba -40 ℃ ~ + 80 ℃
Impact Simba (Kg / cm2) 50kg / cm2
Kubikira Kwemvura Kuramba 2hrs, hapana shanduko
Acid Nemishonga 5% HCL, 24hrs hapana shanduko
Alkali Nemishonga 5% NaOH, 24hrs hapana shanduko
Kuramba kweOiri 20 # injini yemafuta, hapana shanduko
Solvent Nemishonga 200 nguva neMEK
Kuchenesa Kuramba ＞ ka1000 nguva pasina shanduko
Peel Simba 180 ° 5 Newton / mm
Chiwanikwa Type AA3003 / AA1100
Paint Sisitimu / Maitiro / Spec Polyester / Coil Kuputira / AAMA
Kurasikirwa Kwekurira Ruzha (dB) 23-25
R Kukosha (MK / W) 0.0045.0078 0.0110
U Kukosha (W / MK) 5.7 5.6 5.5
Liner Thermal Kuwedzera 2.4 mm / m @ zvese 100 ° C
Chiratidzo cheAlucosun ®mapaneru anoshandiswa mune akasiyana mafomu vanhu vanosangana nawo muhupenyu hwezuva nezuva. Icho chigadzirwa chinobatsira uye chakasiyana-siyana mumasaini uye indasitiri yekushambadzira yezvakanaka zvisikwa.
KUSIMBISA MACHENGA UYE SHOPI INOKOSHESA
Kutenda kune yakatanhamara kuchinjika uye kugadzikana kweAlucosun Sign ®PE, inokodzera pachayo zvakanyatsonaka mukugadzirwa kwemasaini, ekuratidzira, emiratidziro, etc.
Chiratidzo cheAlucosun® PE, PPG yakavimbiswa pendi, ine akasiyana mavara uye gloss sarudzo, inopa mhinduro kwayo yekushongedza kwemukati.
Akatungamirira / UV digitaalinen yokudhinda
Chiratidzo cheAlucosun ®inopa zvese UV kudhinda kwedhijitari uye kudhinda kwe LED. Iyo inogona inowirirana kune ese marudzi emhando yekudhinda michina, iyo yepaneru yepamusoro zvakare inokwanisa yeiyo LED kudhijitari kudhinda. Chokwadi, tekinoroji yekudhinda ye LED inogona kuchengetedza 50% simba. Iyo mwenje mwenje mwenje inogona kuve yekushandisa kwemaawa 4000, zvakare nharaunda inoshamwaridzika, yakadzikama, inoshanda nyore. Inofanira kunge iri tsika yekudhinda indasitiri.
Zvese Alucosun Sign® kupedzisa kunouya kwemakore mashanu garandi yekushandisa kwekunze.Brashi uye girazi rinopedzisa nemaitiro akasiyana hazvivimbiswe kwekunyorera kwekunze kweiyo chaiyo vara vimbiso nemutsa kutibata nesu.
Kubva pakutanga chaipo, Alucosun Sign ®anga achingogara akavhura maziso ayo munzira yese, kubva pakutorwa kwezvinhu zvakasvibirira kusvika kumagumo zvigadzirwa, izvo zvese zvinozadzikiswa nehunhu hwekudzora system - yakanyatsogadzirwa nevanoongorora mahunyanzvi uye epamberi maarabhoratri zvigadzirwa, ichisimbisa izvo zvese zvigadzirwa zvinoenderana nemaitiro epasi rese.
Chiratidzo cheAlucosun ®Chikwata chakazvipira kutsigira vatengi vedu nekupa iyo panguva yekuendesa yezvakanakisa zvigadzirwa zvakavimbika uye masevhisi emhando yakasarudzika. Zvese izvi zvinhu zvinogona kubatsira mukuwana mukana wemakwikwi mumusika wako. Isu tinovavarira kutsigira chiono chedu uye basa nekugara tichitsvaga kuvandudzwa nekusimudzira kuburikidza neyakaenderera mberi dzidzo uye kudzidza.
Tinokukoka iwe kuti uise zvigadzirwa zvedu zvekuyedzwa, iwe unowana zvinopfuura zvawanga uchitarisira!
Kwete kwete kugona chete asi zvakare kufunga kwehunhu kukoshesa.
Pashure: ALUMUMUM RAKUZVEDZA Coil
Zvadaro: Alucosun FR A2
4mm Aluminium Yakaumbwa Panel
Alucobond Aluminium Yakagadzirwa Paneli
Aluminium Yakaumbwa Mapaneru
Pvdf Aluminium Yakaumbwa Panel